Kubudirira kune iyo yepamusoro: Mashandisiro ekushandisa iko Brain application mune zvakadzama? | Kubva kuLinux
Mushure medu wepamberi posvo nezve yazvino vhezheni yakagadzikana uye nzira dzinogona dzekuisa dzinonakidza uye dzinobatsira yakavhurwa sosi uye muchinjiko-chikuva application kudana Bongo, iyo inobvumira kunatsiridza kugadzirwa kwemushandisi pane desktop yemakomputa avo, isu tichaenderera mberi nedzidziso iyi yekuishandisa.
Zvese kuitira kutsanangura zvirinani mashandisiro uye manejimendi zveimwe dzakanakisa kana dzinonyanya kushanda plugins kuti iwe unowanikwa kuti uwane iyo chinangwa chekuwedzera chigadzirwa chedu pakombuta yedu, kunyanya kana vaisa iyo Yemahara uye yakavhurika yekushandisa system, se GNU / Linux.
Zvakanaka kucherechedza izvozvo Brain app, hachisi chikumbiro chakanyanya kurema, ndiko kuti, chinoshandisa zvakawandisa CPU, RAM kana HDD zviwanikwaNekudaro, kune avo vashandisi vanogara vachida kuve nekushandisa zviwanikwa pamakomputa avo kusvika padiki, zvakanaka kujekesa izvo Bongo zvinogona kuvaita kuti vadye chimwe chakakosha kukosha kwavo, kunyanya kana ichishandiswa, kubvira pazororo, zvirokwazvo zvigadzirwa zvayo zvinoshandiswa zvinogamuchirwa.
Naizvozvo hazvikurudzirwi kuti uishandise kana iri komputa yakaderera-zviwanikwa kana iwe unoda kunyatso shandisa yega yega% yekombuta zviwanikwa mune dzimwe nzvimbo kana mabasa.
1 Kubudirira paGNU / Linux: Kudzidza kushandisa Cerebro
1.1 Ubongo hwekutanga setup
1.3 Nzira dzekutsikisa
1.4 Mapfupi ekhibhodi (HotKeys)
1.4.1 C kiyi
1.4.2 E kiyi
1.4.3 M kiyi
1.4.4 O kiyi
1.4.5 P kiyi
1.4.6 Q kiyi
1.4.7 R kiyi
1.4.8 S kiyi
1.4.9 T kiyi
1.4.10 U kiyi
1.4.11 V kiyi
1.4.12 Keys 1 kusvika 9 uye Key »*«
1.4.13 Mazano »+» uye »-«
1.4.14 "Arrow up" kiyi
Kubudirira paGNU / Linux: Kudzidza kushandisa Cerebro
Ubongo hwekutanga setup
Iyo yekutanga uye yakakosha kumisikidzwa kweCerebro inonyanya kukosha. zvake gadziriso hwindo boils pasi kune anotevera parameter:
Direct Kuwana Kiyi (HotKey): Muchikamu chino mashandisirwo anobvumidza iwe kumisikidza kiyi yemakiyi anodikanwa ekumisikidza iko kushanda pasina kudikanwa kwe mbeva (mbeva). Nekukanganisa, iyo kiyi yekubatanidza yakagadzirirwa «Ctrl+Space». Asi inoitendera kuti ishandurwe kana tikazvimisikidza pabhokisi rechinyorwa uye tinya kiyi «Ctrl» uye pasina kuisunungura, tinodzvanya yechipiri kiyi kutsiva (kutsiva) kiyi «Space».
Nyika (Nyika): Muchikamu chino tinogona kuratidza kuCerebro nyika yedu yazvino, kuitira kuti gare gare, ishandise ruzivo irworwo kugadzirisa kana kukwidziridza dhata kutipa. Semuenzaniso, ne plugin (plugins) de mamiriro ekunze) tipei yakanyanya kutaurwa uye yakananga data.
Dingindira: Muchikamu chino tinobvumidzwa kusarudza yakatarwa Musoro wekuchinja iwo anoonekwa echishandiso graphical interface. Uye zvechokwadi, uyai nedingindira «Dark», iyo inowanzo kukosheswa nevazhinji.
Nzira dzakasiyana siyana: Pakupera kwe gadziriso hwindo, isu tinoratidzwa akateedzana sarudzo dzinganzi:
Vhura panguva yekupinda: Kuraira iyo application kurodha kana iyo inoshanda sisitimu yatanga uye mushandisi matanda mukati mayo. Iyi sarudzo inogoneswa nekutadza.
Ratidza mumenu bar: Kuudza iyo application kuratidza icon yeiyo yakafanana, mune yebasa bar pamusoro penzvimbo yekuzivisa yeDesktop Nzvimbo yakashandiswa. Iyi sarudzo inogoneswa nekutadza.
Maitiro Ekuvandudza: Iyi sarudzo yepamberi inoshandiswa nevakazvitsaurira kugadzirisa dambudziko, nekudaro sarudzo iyi haina kumisikidzwa nekutadza, uye haina kukurudzirwa kuti uite iyo kunze kwekunge iwe uri mushandisi wepamberi.
Yakachena mhedzisiro pachivande: Iyi sarudzo inotaurira iyo application kuti ibvise yedu yekutsvaga uye yekumashure mashandiro nguva dzese painotangwazve. Iyi sarudzo inogoneswa nekutadza.
Tumira mazita asingazivikanwe - anoda kutangazve: Iyi sarudzo inowanikwa kubvumidza kutumirwa kweruzivo pamusoro pekushandisa kwesoftware kune vanogadzira kuti vashandise, kuti vavandudze. Iyi sarudzo haina kuvhurwa nekutadza.
Tumira otomatiki kupaza mishumo - inoda kutangazve: Iyi sarudzo inowanikwa kubvumidza kutumirwa kwemashoko nezve zvikanganiso zvekushandisa kune vanogadzira kuti vaishandise, kuivandudza. Iyi sarudzo inogoneswa nekutadza.
Uye zvakare, iko kushandiswa kwegonzo kufamba mune application, iyo inobvumidza kushandiswa kwekhibhodi kufamba mukati mayo. Makiyi akarongerwa izvi zvinotevera:
Side mirayiridzo miseve « <- -> » y « ctrl + j/k » anoshandiswa kusarudza inotevera kana yapfuura chinhu.
Mazano « enter » uye tsamba yacho « o » anoshandiswa kusarudza chinhu.
Mazano « escape » kana museve wekuruboshwe « <- » ivo vanoshandiswa kuendesa sarudzo kumashure kune yakakosha mhedzisiro rondedzero.
Mapfupi ekhibhodi (HotKeys)
Kuisa Uropi (Ona Kugadziridza)
Shanduro yehuropi (Ona vhezheni nhamba)
Bvisa Marara (Bvisa marara)
Ubongo Buda (Vhara iyo application)
Bvisa (Bvisa vhoriyamu yekomputa)
WiFi Yakavhurwa (Batidza mudziyo weWiFi wecomputer)
WiFi Yadzimwa (Bvisa iyo WiFi kifaa checomputer)
Manage plugins (Manage Brain plugins)
Kurega Ubongo (Buda kunyorera nekuvhara)
Reload (Ronzazve chishandiso)
hope (Bvumira komputa hibernate basa)
Shura pasi (Ita kuti basa rekuvhara kombiyuta rivepo)
Unmute (Batidza vhoriyamu yekomputa)
Keys 1 kusvika 9 uye Key »*«
kupenya (Screen kupenya padanho)
Mazano »+» uye »-«
vhorumu (Computer vhoriyamu chikamu)
"Arrow up" kiyi
Wokupedzisira rairo yakaitwa (Wekupedzisira kuraira wakaitwa)
Parizvino, Bongo ine zvinotevera plugins zviripo, yatichataura gare gare uye zvakadzama kuti tibatsire kushandisa kwavo uye kuitisa, mukufarira iyo kubudirira yevashandisi vayo vese, zvisinei neiyo Inoshanda Sisitimu yakashandiswa.
Ini pachangu, ndinofunga zvaive nani pane Ubongo hunofanira kuvandudza pane zvinotevera kuti ushandise zvirinani:
Rega kurerutsa hwindo rekumisikidza.
Rega iyo yekuyangarara yekutsvaga bhagi kuDesktop.
Tsvaga shanduro yayo mumitauro yakati wandei, kunyanya Spanish.
Iva unoenderana zvakanyanya nezvazvino vhezheni dzeGNU / Linux Distributions.
Gadziridzwa kakawanda, kwete kungo tarisa pane makuru mawedzero-akawedzerwa.
Tinovimba izvi "inobatsira shoma posvo" about «Cerebro», yechipiri yekunyora kwangu uye yechitatu muBlog, inofambisa mashandisirwo uye kuchinjika kwechishandiswa chakataurwa kune avo vashandisi vanoshuvira kuwedzera kugadzirwa kwavo pamakomputa avo, uye nekudaro, zvakanyanya kufarira uye kushandiswa, Zvese «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» uye yemupiro mukuru mukupararira kweinoshamisa, hombe uye kukura ecosystem yezvishandiso zve «GNU/Linux».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Kubudirira kune iyo yepamusoro: Mashandisiro ekushandisa iko Brain application mune zvakadzama?
Pamashandisirwo echitaera ichi ini ndinoda 'Albert'.
Ndatenda nekutaura uye zano rako. Ndiri kutoyedza 'Albert' uye zvinotaridzika chaizvo. Ini zvechokwadi ndichaita chinyorwa nezvake munguva pfupi.
Parizvino, ndichave ndichiita chinyorwa chechitatu uye chekupedzisira paCerebro, kunyanya pakugadzirisa mamwe mapulagi anobatsira ayo anofanirwa kuwedzera kugadzirwa kwayo.
Ini ndaishandisa uropi kwenguva yakareba kudzamara yatanga kundipa matambudziko, uye ndezvekuti kuchengetedza kwayo / kusimudzira kunoita kunge kuri kumira; Haina kuvandudzwa kubvira 2017. Shanduro 3.1 yakandishandira asi 3.2 haina kumboita. Kune rimwe divi, Alber inoita kunge iri nani mune izvo.
Parizvino, kana uchida, iwe unogona kuverenga chinyorwa chechitatu uye chekupedzisira paCerebro, kunyanya pane manejimendi ezvimwe zvinowedzera zvinowedzera (plugins) iyo inofanirwa kuwedzera kugadzirwa kwayo: https://blog.desdelinux.net/complementos-cerebro-plugins-aumentar-productividad/